Global Voices teny Malagasy » Mijery TV Mikaroka Vaovao Ireo Rosiana Mpampiasa Aterineto, Saingy Mitoky Kokoa Amin’ireo Loharano Ety Anaty Aterineto, Hoy Ny Fanadihadiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Mijery TV Mikaroka Vaovao Ireo Rosiana Mpampiasa Aterineto, Saingy Mitoky Kokoa Amin'ireo Loharano Ety Anaty Aterineto, Hoy Ny Fanadihadiana
Voadika ny 30 Janoary 2016 4:03 GMT 1	 · Mpanoratra Tanya Lokot Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Akon'ny RuNet
Roa ampahatelon'ny Rosiana ankehitriny no mitsidika tsy tapaka ny aterineto. Sary avy amin'ny Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0.
Mbola miantehitra amin'ireo mpampahalala vaovao tranainy ny ankamaroan'ireo Rosiana mpampiasa aterineto amin'ny fikarohana vaovao sy torohay isanandro, araka ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny “Foundation for Public Opinion” . Efa ho ny antsasaky ny mpampiasa ny RuNet no mitety ireo loharanom-baovao samihafa mba hahazoana ny sary tena feno.
Ilay fanadihadiana , navoaka ny 25 Janoary, dia nanadihady an'arivony tamin'ireo mpampiasa aterineto tany aminà tanàna Rosiana zato mahery momba izay fanao mahazatra azy ireo amin'ny fanjifàny ny vaovao.
Ampahany betsaka 78% amin'ireo Rosiana mpampiasa aterineto no niteny fa avy amin'ny fahitalavitra no mazàna hakan-dry zareo ny vaovaony. Manaraka azy akaiky eo ny fisafidianana ny tranonkalam-baovao ety anaty aterineto ho loharanom-baovao, 60%, arahan'ny resadresaka ifanaovana amin'ny namana sy ny fianakaviana (22%), radio (12%) ary ny gazety an-tsoratra (10%). (Fanamarihana: valinteny telo no safidy nomena ireo mpamaly tamin'ity fanontaniana ity).
Raha 60% amin'ireo mpampiasa aterineto ao Rosia no miantehitra amin'ireo famoahana vaovao ety anaty aterineto ho toy ny loharano fototra, mbola ambany kokoa io tarehimarika io ho an'ireo 18-24 taona izay 54% monja. Ankafizin'izy ireo kokoa ny media sosialy sy ny bilaogy, matetika no efa ho avo roa heny ny fisafidianany azy (30%) miohatra amin'ireo mpampiasa ny RuNet amin'ny ankapobeny (18%).
Efa ho 20% amin'ireo nohadihadiana no nilaza fa tsy nanjifa vaovao tety anaty aterineto mihitsy nandritra iny volana lasa iny.
Rehefa anontaniana ireo lohahevitra dimy sangany indrindra amin'ny vaovao nofinidiny ho arahana ety anaty aterineto ry zareo, dia napetrak'ireo mpamaly ho ery antampony ny vaovao manerantany, 39% amin'ireo mpampiasa no mikaroka vaovao momba ny tantaran'izao tontolo izao ankehitriny ety anaty aterineto. Malaza ihany koa ny politika Rosiana sy ny raharaham-panjakana Rosiana (34% sy 31%), arahan'ny politika sy fifandraisana iraisampirenena (30%). Ireo vehivavy no tena liana kokoa amin'ny vaovao momba ny fianakaviana sy ny tokantrano avy eo ny lehilahy (33% vs. 9%), raha ny resaka raharaha miaramila Rosiana indray no arahan'ny lehilahy akaiky kokoa (31% vs. 8%).
Ampahany betsaka 67% amin'ireo mpampiasa no nilaza fa amin'ny alàlan'ireo lohamilina fikarohana no itrandrahany ny vaovao, toy ny Yandex (55%) sy Google (27%). 36% no niaiky fa amin'ireo sehatra media sosialy ry zareo no mamaky ny vaovao (VKontakte—mitarika amin'ny 26%, Facebook, Twitter, etc.), sehatra fiadiankevitra na bilaogy. 17% monja no mandeha mivantana maka ny vaovaony any amin'ireo tranonkalam-baovao. Ny tranonkalam-baovao tena malaza indrindra voatonona dia ny vesti.ru (21%), RIA Novosti (17%), Argumenty i Fakty (16%), raha nahazo 3%, 2% sy 1% tsirairay araka ny laharany kosa ny TV Dozhd, Slon ary ny Meduza.
53% amin'ireo mampiasa ny tranonkalam-baovao no niteny fa tsy manana loharano nofidiany manokana. Mandritra izany fotoana izany ihany, nilaza ny 29% amin'ireo Rosiana mpampiasa tambajotra fa aleon-dry zareo mampiasa loharano iray na roa mba hakàny vaovao, raha 47% no nilaza fa aleony mampiasa loharano samihafa mba hahatakarana sy hahazoana sary mazava kokoa momba ny raharaha amin'izao fotoana izao.
48% amin'ireo nanaovana fanadihadiana no niteny fa itokian-dry zareo kokoa ny torohay hitany ety anaty aterineto (maitso), raha 17% kosa nilaza fa tsy dia tena matoky loatra (mena). Pikantsary nalaina tamin'ny tabilaon'ny fom.ru.
48% tamin'ireo namaly no nilaza fa matetika mitoky amin'ireo vaovao hitany ety anaty aterineto, raha 17% nilaza ho tsy matoky ireo loharano ety anaty aterineto. Mandritra izany fotoana izany, inoan'ny 37% amin'ireo Rosiana fa mitovitovy ihany ny tatitra amin'ny fahitalavitra Rosiana sy ny ety anaty aterineto momba ireo tranga goavana ao Rosia sy any ivelany, raha 37% tahaka izay ihany no niteny fa misy fahasamihafàny be ny fandrakofana ny vaovao ataon'ny TV sy ny ety anaty aterineto. Ao anatin'ireo mitoky kokoa amin'ny loharano ety anaty aterineto, 56% no mino fa misy fahasamihafàny ny fanehoankevitra sy ny fomba fandrakofana vaovao amin'ny TV sy ety anaty aterineto.
Raha mitranga ny hoe mifanohitra ireo hafatra sy sehatra resahan'ny TV sy ny aty anaty aterineto, lazain'ireo 32% amin'ny Rosiana mampiasa aterineto fa ny vaovao amin'ny fahitalavitra no mety hitokian-dry zareo kokoa miohatra amin'ny ety anaty serasera, ary 30% nilaza fa aleony mitoky amin'ny loharano ety anaty aterineto. Ireo latsatsy ny 30 taona namaly ny fanadihadiana dia naneho ny fitokiany mitanila mankany amin'ny median'ny aterineto, misy 36-37% mitoky amin'ny aterineto raha mitranga ny tsy fitoviana, ary 25-28% monja no mitoky amin'ny vaovaon'ny TV.
Araka ny voalazan'ny tatitra iray tamin'ny lohataona 2015  avy amin'ny “Foundation for Public Opinion” , maherin'ny roa ampahatelon'ireo Rosiana (77.5 million) ankehitriny no mitsidika tsy tapaka ny aterineto, araka izany dia teboka manandanja ho an'ireo mikatsaka ny hahatakatra ny fiovàn'ny tontolon'ny media Rosiana ny fomba fijerin-dry zareo ireny ny loharanom-baovao ety anaty aterineto sy ny fomba fanjifàny azy, raha jerena ny fanarahamaso tsy mitsahatra ataon'ny fanjakàna amin'ireo fampahalalambaovao mahazatra sy ny firoborobon'ny tsindry atao amin'ny fahalalahana omen'ny aterineto.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/30/78902/
 tatitra iray tamin'ny lohataona 2015: http://fom.ru/SMI-i-internet/12369